» न्युज २४ टेलिभिजनको ‘सीधाकुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका प्रोड्युसर दीपक बोहोराले बल्ल मुख खोले ! कार्यक्रमको बारेमा यसो भन्छन हेर्नुहोस् न्युज २४ टेलिभिजनको ‘सीधाकुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका प्रोड्युसर दीपक बोहोराले बल्ल मुख खोले ! कार्यक्रमको बारेमा यसो भन्छन हेर्नुहोस् – हाम्रो खबर
न्युज २४ टेलिभिजनको ‘सीधाकुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका प्रोड्युसर दीपक बोहोराले बल्ल मुख खोले ! कार्यक्रमको बारेमा यसो भन्छन हेर्नुहोस्
काठमाडौ । चर्चित टेलिभ’जन प्रस्तोता रवि लामि’छानेले न्यूज २४ टेलिभिजन छाडेसँगै ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम विवादमा परेको छ ।
‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम प्रशारणलाई न्यूज २४ टेलिभि’जनले जारी राख्ने बताइरहेका बेला रवि लामि’छानेले पनि सोही कार्यक्रम गर्ने भन्दै आफ्नो गुनासो टि’पाउन सम्पर्क नम्बर सार्व’जजिक गरेका छन् ।
गत बिही’बार ला’मिछानेले न्यूज २४ टेलि’भिजन छाडेका थिए । बिहीबार न्यूज २४बाट रवि बाहिरिएसँगै ‘सिधा कुरा जनतासँग’को कपिराइट विवा’द हुने देखिएको हो । बिहीबार न्यूज २४ बाट बाहि’रिँदै गर्दा लामिछा’नेले आफूले तयार पा:रेको भिडि’ओ रिपोर्ट न्यूज २४ ले काटेर प्रशारण गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
यसप:छि लामिछानेका समर्थकहरु आक्रो’शित भए’का थिए ।
कार्यक्रमका विषयमा विभिन्न प्रतिक्रिया आए पनि सो कार्यक्रमका प्रस्तोता रवि लामिछाने भने मौन छन् । उनले यस विषयमा अहिले सम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् भने उक्त कार्यक्रमका प्रोड्युसर दीपक बोहोराले भने नयाँ टेलिभिजन का
विषयमा सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेखेका छन् : सीधाकुराजनतासँग कार्यक्रम कसको हो भन्ने बारेमा भने उनले केही खुलाएका छैनन् । हेरौं उनको स्टाटस: News24 Tv रवि दाईले मात्र हाेईन म लगायत हाम्राे सिधा कुरा टिम सबैले छाेडेका हाैँ ।
४५ मिनेटकाे कार्यक्रम मात्र हाेईन नयाँ टेलिभिजन जनताका चासाे ,गुनासाे र प्रश्नमा सर्मपित हुनेछ ।
टेलिभिजन प्रसारण हुन वैशाख लाग्ला तर गुनासाे सुन्ने र भेटघाट गर्ने काम सुरु भईसकेकाे छ । यसबीचमा हामीलाई 9851322111 र 9801038181 मा सम्पर्क गरि वा म्यासेज पठाई आफ्नो गुनासो टिपाउनु होला।
थुतुनो धेरै चलाउँदा फसिन् रामकुमारी झाँक्री! ओलीको जेल हाल्ने ! तयारी यस्तो रहेको छ ! अब के होला ? झाक्री यस्तो भन्छिन ! हेर्नुहोस